Sesiyayazi imodi emnyama ye-WhatsApp ye-Android | Izindaba zamagajethi
Sesiyazi imodi emnyama ye-WhatsApp ye-Android
URafa Rodríguez Ballesteros | | WhatsApp
Siyathwala cishe unyaka ulalele ukukhuluma ngemodi emnyama yeWhatsApp, kodwa lona aliqedi ukufika. Uma ungomunye walabo abakubheke ngabomvu, namuhla sinezindaba ezimnandi ngawe. Kubonakala sengathi isibuyekezo sohlelo lokusebenza lokugcina silungile ekhoneni. Ngalesi sikhathi yebo, ekugcineni sizokwazi ukukhetha ukwenza imodi emnyama elindelekile.
Noma kunjalo asinalo usuku olusemthethweni ngokwethulwa kwayo, njengenjwayelo. Sikwazile ukubona izithombe zezinguqulo ze-Beta lapho izizinda zibonakala zenzelwe ukusetshenziswa ngemodi emnyama. Okuthile nge- inketho "okuzenzakalelayo kwesistimu" izocushwa ngokuzenzakalela lapho sisebenzise imodi emnyama kusistimu yethu yokusebenza.
Imodi emnyama yeWhatsApp iyehla
Isibuyekezo se-WhatsApp lapho sizothola khona imodi emnyama sinikeza futhi noshintsho lobuhle kuhlelo lokusebenza. Sizothola i- isibonisi esibuyekeziwe nokuningi ngokuhambisana nezibuyekezo zezinhlelo zokusebenza ezinhle. Imithunzi yemenyu ye-WhatsApp iqala ukuba nemibala efudumele futhi emnyama. Ngale ndlela ukushintshela kumodi emnyama kubushelelezi futhi kuhlangana kangcono ohlelweni lwethu lokusebenza.
Ingabe imodi emnyama imbi kangaka? Iqiniso ukuthi ukucabanga ngokuvuselelwa kohlelo olusebenzayo noma uhlelo lokusebenza okuthi "into enhle kakhulu" ukuba nemodi emnyama kushiya kungathandeka. Yize kufanele sivume, ikakhulukazi ngemuva kokuzama ezinye izinhlelo zokusebenza, lokho ukonga amandla okutholwe ngemuva kokusetshenziswa kuyamangalisa. Futhi lokho ngaphezu kwakho konke ezindaweni ezimnyama, ukufunda kukhululeke ngokwengeziwe futhi ayinabungozi kangako emehlweni.
Kubukeka sengathi isicelo besizolunga ngokuphelele, okungenani maqondana nokubukeka kwesixhumi esibonakalayo kanye nokuklanywa okushintshelwe kwimodi emnyama. Sikwaze nokwazi ukuthi amaphephadonga esinawo manje azohlala, yebo, elungiselelwe ukuze ukusebenzisa imodi emnyama kungakhanyi noma kucasule. Ngaphezu kokuqaliswa kokukhethwa kukho ngakho ngiyaphinda imodi emnyama siyakwazi lokho lokhu ngeke kukhawulelwe kuphela ukudaya uhlelo lwethu lokusebenza lube mnyama esetshenziswa kakhulu. I- «imodi emnyama» Kususelwa kumathoni "ebusuku aluhlaza" azobukeka enza ushintsho kuthoni lubushelelezi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » WhatsApp » Sesiyazi imodi emnyama ye-WhatsApp ye-Android
Le yimidlalo ezofakwa yiGoogle Stadia ekwethulweni kwayo
I-Energy Sistem neDecathlon bazokwamukela iBizum njengendlela yokukhokha